Ciidmada XDS oo tiro maleshiyaad ah ku dilay tuulada Masaajid Cali Guduud ee G/Sh/Dhexe – Radio Muqdisho
Fariisin ay ciidamada XDS ku lahaayeen duleedka tuulada Masaajid Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Sh/Dhexe ayaa xalay saqdii dhexe waxaa soo weerar maleeshiyaad ka tirsan Shabaab oo watay gaadiidka dagaalka.
Qaar ka mid ah dadka deegaankaasi ayaa Radio Muqdisho u sheegay in saqdi dhexe ee xalay ay maleeshiyaad ka tirsan Shabaab oo wata gaadiidka dagaalka ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada XDS ku lahaayeen duleedka tuulada Masaajid Cali Guduud, iyagoo sheegay in halkaasi uu ka dhacay dagaal soocday muddo saacad ah.
Sarkaal ka tirsan ciidamada XDS ee ku sugan tuuladaasi ayaa sheegay in ay ciidamadu u jilib dhigeen weerarkaasi iyagoo ku guuleeystay iney kala ceyriyaan maleeshiyaadkaasi, wuxuuna intaasi ku daray saaka lagu arkay halkaasi tiro meydad ah oo ay maleeshiyaadki shabaab ka carareen.
SIdoo kale sarkaalkaasi ayaa qiray in laba askari ay uga dhaawacmeen dagaalki xalay, wuxuuse meesha ka saaray iney jiraan wax dhimasho ah oo soo gaaray ciidamadaasi.
Ciidamada ayaa la sheegay iney saaka billaabeen howlgallo ay ku baacsanayaan firxadka maleeshiyaadki xalay soo weeraray, iyagoo gacan ka helaya dadka ku nool deegaanka Masaajid Cali Guduud.
Tuulada Masaajid Cali Guduud ayaa ka mid ah deegaannadi ugu dambeeyay ee ciidamadu ka xoreeyeen maleeshiyaadka Shabaab oo muddo sanaddo ah dhibaatooyin xad dhaaf ah ku hayay dadka ku dhaqan deegaankaasi.
Madaxweyne Erdogan “Waanu sii wadi doonnaa halganka aanu argagaxisada kula dagaalamayno”+Sawirro
R/wasaaraha oo ka qeybgalay munaasabad lagu xusayay dhalashadi boqoradda Ingiriiska+Sawirro